Doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dib uga bilaabmatay Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDoorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dib uga bilaabmatay Garoowe
December 11, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Ilaa iyo hadda waxaa lasoo doortay 27 xildhibaan iyada oo Puntland aqalka hoose ku leedahay 37 xubnood. [Xuquuqda sawirka: Sahan Online]
Garoowe-(Puntland Mirror) Doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee Puntland u matali doona dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah dib uga bilaabmatay magaalada Garoowe ee caasimada dowladda Puntland.
Bartamihii bishii lasoo dhaafay ayaa digteero kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cumar Camay waxaa lagu joojiyay hanaanka doorashada, balse asbuucii lasoo dhaafay ayaa dib loo fasaxay.
Doorashada maanta oo wali socota ayaa lagu doortay ilaa iyo hadda shan xildhibaan, taasoo ka dhigaysa xildhibaanada guud ee ilaa iyo hadda la doortay 32 xildhibaan. Puntland ayaa aqalka hoose ee Soomaaliya ku leh 37 xubnood.
Death toll rises to 30 after car bomb explodes outside Mogadishu main port
Yaan maantay u baahanahay?
Maadama lagu jiro xili kala guur ah oo dowladdii horena waqtigeedu gabaabsi yahay mid cusubna la sugaayo waxaa mudan in aan wax iska weydiino cidda dalku u baahan yahay in ay hoggaamiso. Dadka ku hardamaanya [...]